Xusuusin 5 iyo iPhone 6: Tijaabada xawaaraha [fiidiyow] | Wararka IPhone
Paul Aparicio | | Android, iPhone 6
Sida mar kasta oo taleefan casri ah oo cusub la soo saaro, waxaan horeyba u haysanay kii ugu horreeyay tijaabada xawaaraha taas oo Samsung-kii ugu dambeeyay ee soo muuqday ka qaybqaato. Tijaabooyinka noocan ah, xawaaraha qalabka waxaa lagu tijaabiyaa barnaamijyadooda furan, laakiin waxay ku sameeyaan laba wareeg. Wareegga koowaad, ma jiraan wax codsiyo ah oo ka furan asalka wareega labaadna waxay dib u furi doonaan codsiyada ay ku furteen wareegga koowaad.
El Galaxy Note 5 Waxay leedahay Exynos 7420 2.1 GHz 8-core processor oo leh 4GB oo RAM ah waxayna wajaheysaa iPhone 6, kaas oo la sii daayay ku dhowaad sanad ka hor, oo leh processor A8 1.4GHz oo laba geesle ah iyo 1GB oo RAM ah. Warqad ahaan, waxaan dhihi karnaa in Xusuusin 5 uu leeyahay xoog caajis ah afar jeer kan iPhone 6. Farqiga ma noqon doonaa mid sidaa u muuqda? Waa tan jawaabta.
Sida aad ku arki karto fiidiyowga, kala duwanaanshaha ku jira wareega koowaad waa yar yihiin, laakiin ah dhammee kahor Fiiro 5. IPhone 6 waqti yar ayuu ku qaadanayaa inuu furo codsiyada markii ugu horeysay, marka laga reebo cayaaraha sida aan ku arki karno Shimbiraha Xanaaqsan 2. Waxay ku jirtaa wareegii labaad, horeyna waxaan ugu aragnay isbarbardhigyadii hore, halkaasoo TouchWiz Samsung waqti badan ayey lumisaa. IPhone 6, sida aaladaha kale ee Android, codsiyada ayuu uga tagaa asalka, laakiin Samsung terminals-ka ayaa dib u soo rogaya codsiyada mar labaad iyo, dabcan, taasi si gaar ah ayaa looga dhex arkaa codsiyada oo qaata waqti dheeri ah maxaa yeelay waa inay si buuxda u furaan laba jeer.
Natiijada ugu dambeysa ayaa ah 01:08:09 loogu talagalay iPhone 6 leh macruufka 8 iyo 01:25:19 loogu talagalay Galaxy Note 5 leh Android 5.1.1. Waxaan u maleynayaa inaysan aheyn wax la tixgeliyo maxaa yeelay waxaan doorbidaa kun jeer in ay wax yar gaabis tahay laakiin aniga oo aan fiirsan jerks inta aan arko wax walba si dhakhso leh una arko inay jiraan animations aan dheecaan lahayn. Maxay kula tahay
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Tartanka » Android » Xusuusin 5 iyo iPhone 6: Tijaabada xawaaraha [fiidiyow]
Laakiin waxay ahayd in laga filo qof walba wuu ogyahay in Samsung kaliya ay sameyso qashin.
Sida A6, A7, A8, A8X iyo A9, sax? Waa waxa ay tahay jaahilnimo iyo in kor laga saaro si loo muujiyo.
Ah, laakiin isagaa ku sameeyey?
Indho caqli badan dijo
SALAAN, adiguba iphone 6 miyaad kasii deysaa vodafone Ireland iyo Portugal? salaan
Kajawaab Smart Eye
Waa in la ogaadaa in i6 horeyba u jirtay hal sano
Aniga ahaan arinta kuma saabsan Samsung qashinka soo saarista. Xaqiiqdii way cadahay qofka sameeya qalabka Iphone-ka. Dhibaatadu waa nidaamka guud ee hawlgalka Android. Si kasta oo ay u fiicnaadaan mashiinada Samsung, waligood ma heli doonaan waxqabad 100% ah haddii aysan adeegsan nidaam hawlgal u heellan ... Dhar khaas ah. sida ay tahay IOS.
Hadda haddii Samsunglover kasta ii sharxi karo sababta qalabka astaamahaas gaarka ahi ugu adkeysi yaryahay Iphone-ka, waan ku qanacsanahay. Waxaan arkaa Iphone 4 oo ka shaqeynaya dildilaaca, si kastaba ha noqotee Samsung-kii waqtigaas ayaa badanaa la dagaallamaya. gaar ahaan isku xirayaasheeda. (Sameecadaha dhagaha iyo xeedho) Haddii aan lacag aad u fara badan bixinayo, ugu yaraan way i sii socon doontaa. Sababta sababta ilaa maanta, waxaan ula sii joogaa Iphone.
WAQTIGA RODRIGO, WAANU WADA WADA OGNAHAY CIDA SAMEEYSA PROCOLOR PROROR, LAAKIIN QORSHE, QORSHEYNTA WAXA LAGU SAMEEyaa TELE! SAMSUNG KELIYA AYAA DHISMAYA PROCOLOROR APple AMAR AY KU SAMEysaa!
Haa, laakiin ma ogi haddii aan idhaahdo waxay ka dhigeysaa kaliya Qashinka waa waxa saxda ah in la sameeyo ... Sikastaba waxaan u maleynayaa waana sii wadi doonaa inaan ka fikiro in Samsung uusan Apple la simaneyn ama la simaneyn. Iyo wax ka yar haddii aysan nidaam abuurin. op. dusha sare ee qalabka khadka.
Hugo Vega Lugo sawir-haye dijo
Waxaad is barbar dhigaysaa taleefanka gacanta ee hadda la sii daayay (Xusuusin 5) oo ka dhan ah mid kale oo lagu beddelayo laba toddobaad gudahood (IPhone 6).
Ku jawaab Hugo Vega Lugo
Dhibaatada Samsung waa madal ay tahay qashin, ma aha taleefanka laftiisa
Ayuu yiri Antonio Recio.
@gabrielort waxaa loo sheegay inay kaliya ku faanaan sida doqonimadooda ay yihiin oo ay usocdaan.
A8 iyo wixii la mid ah waxay adeegsadaan qaab dhismeedka ARM oo aan laga helin tufaax. Isla sidaas oo kale ayaa dhacda marka la soo saarayo processor 14nm ah, nidaamkan MA LEH TILAAL, laakiin waa lagama maarmaan u shaqeynta saxda ah ee processor-ka.
Apple sida oo kale ma aha soo saare qalab ama softiweer. Tusaale ahaan IOS waxay ku saleysan tahay UNIX, Intel waxay iibisaa processor-ka loogu talagalay Macbook iyo Samsung xitaa xusuusta RAM.
Dhab ahaan, miyay wali ku waalan yihiin inay kuugu yeeraan FANBOYS IYO JAHLIYO?
PS: Ka waran haddii Apple ay alifaan waxay ahaayeen tufaax.
Faalladaadu waxba kama jawaabi doonto. Haddii aad kala furfurto dhammaan qalabka waxaad arki doontaa inay yihiin midowga qaybo ka socda soo saarayaal kala duwan. Marka laga hadlayo alaabooyinka la dhammeeyay, ee ay tahay mawduuca aan ka hadlayno, MA JIRTO KHILAAR CADDEYN OO KU SAABSAN QAYBTA SAMSUNG HAYSTA EE, KU SAABSAN TAARIIKHDA SOO SAARKA, OO AY AHAYD INAY AHAYD. Haddii aad tihiin ANTI JOBS ii sharax waxa aan kor ku weydiiyey. Sababtoo ah cimri dhererka aaladaha Samsung ee ugu sarreeya ayaa ka yar kan Apple. Laakiin ka jawaab mawduuca, haddii kale, waxaad dhaantaa inaadan waxba dhihin waana fahmayaa inaad sidaad muujisay, wax fikrad ah kama lihid.
Miskiin la ooyo: https://youtu.be/zHb6IlmmV2o
Xaafada S6 ilaa iPhone 6 Taasi miyay S6 ka wanagsantahay? Maya, taasi waa qaraabo.
Waxaan u dhigay sidan:
Waxaan haystaa ku dhowaad 3 sano oo leh Xusuusin 3, kaas oo hoos u dhacay waqtiyo aan tiro lahayn oo aan jabin (in kasta oo aan la isticmaalin dabool). Iyo qalabka gargaarka maqalka (in kastoo ay ku dhammaadeen mashiinka dharka lagu dhaqo) iyo xeedho-qaate weli wuu shaqeynayaa.
Laga soo bilaabo markaan iibsaday, waxaan la shaqeyn karay ama barnaamijyo ka badan isla waqtigaas. IPhone 6s waa JUST oo leh awoodaas oo leh iOS9 (ku dhawaad ​​seddex sano soo daahay). Taasi, marka laga eego aragtida ah in isticmaale kasta oo adeegsada taleefannadooda casriga ah ujeeddooyin wax soo saar, WAA SARE.
Tusaale kale ayaa ah in Samsung horeyba u ogolaatay duubista tooska ah iyo STREAMING ee ciyaaraha. Tusaale ahaan, waan ciyaari karaa Asphalt 8 isla markaana isku mar ayaan ku duubi karaa 1080p (gaabis la'aan). Taasi waa wax aysan iPhone sameyn karin (waa la fahmi karaa haysashada kaliya 1gb) iyo qof kale oo soo geliya cayaartooda haddii ay tahay SUPERIORITY.
PS: Naaneysteyda maahan sababta oo ah waan necbahay Apple, runti waxaan haystaa 2015-inch Macbook PRO 13 (laguma guuleysan karo goobta shaqada). Kaliya ma doonayo inaan leefleeco digaaga qof sameeyey shuqulkiisa noloshiisa sida Steve Jobs (lo 'muqaddas ah ee NOOBS of technology).
Waad salaaman tihiin, Jobs Anti. Runtii ma doonayo inaan dood bilaabo. Waxaan kaliya rabay inaan faallo ka bixiyo in imtixaanadan labo siyaabood loo sameyn karo: mid, si hufan, waa hal laab halkaasna S6 ayaa ku guuleysata maxaa yeelay waxay si dhakhso leh u furaysaa codsiyada. Laakiin imtixaanadan waxaa lagula talinayaa in la sameeyo 2 jeer, mid si loo hubiyo sida ay u furayso codsiyada iyo mid kale oo lagu hubinayo sida ay ugu furan tahay barnaamijyada asalka. Ku sameynta mid (halka S6 ay ka xoog badan tahay) waxay lamid tahay inaad dooneyso inaad ku ciyaarto ciyaar isboorti oo kaliya guriga, marka waxa ugu fiican uu ugu horreeyo guriga midkood, halka uu ka xoog badan yahay, ka dibna guriga kan kale, halkaasoo kan labaad ayaa ka xoog badan.
Waxaan sidaa u idhi maxaa yeelay ma garanayo qof had iyo jeer xidha dhammaan codsiyada ka imanaya shaqooyinka badan. Waxaan aaminsanahay in isticmaalka caadiga ahi yahay in la furo arjiyada oo aan la xidhin ilaa aad ogaato in nidaamku dhib qabo. Haddii aad ii sheegto inuu jiro laab saddexaad oo waliba waxtar u leh, markaa waxaan dhihi lahaa waxay qaadataa saddex laab.
Salaan, hana u qaadin waddo khaldan, kana fog, in xitaa haddii aad u tagto, aad had iyo jeer ku sameyso wadahadal, aqoon iyo xushmad.
Taas bedelkeeda, Pablo. Had iyo jeer waxay noqon doontaa farxad inaad aqriso faallooyinkaaga.
Waan kugu raacsanahay in habka loo sameeyo tijaabooyinkan uu yahay mid badh la dubay, in tijaabo muunad ah iyo tijaabo xaqiijin ah (2 wareeg sidaad sheegtay) loo baahan yahay.
Waxa xun, oo aan shaki ku jirin, waa FANBIYADA laga sii daayo labada dhinacba. Waa inaan fahanno inay tahay hal tijaabo, oo uu sameeyay qof gaar ah iyo inaysan ka tarjumeynin waayo-aragnimadii ugu dambeysay ee annaga oo ah isticmaaleyaasha sumadda X ama Y.
Haddii barta Iphone ay daabacdo dhammaan tijaabooyinka waxqabadka meesha ay ku guuleysato iyo wax kasta oo Samsung ah sannadkan ama Nexus ah ... waxay noqon laheyd sheeko kale.
Waan aqriyay dhamaan faallooyinka, Apple fanboys iyo Samsung fanboys. Runtu waxay tahay in labada dhinacba ay yiraahdaan waxyaabo nacasnimo ah waxayna sidoo kale tilmaamayaan waxyaabo muhiim ah ... shaqsiyan ma siin doono dhibaatooyin badan, ma isbarbardhigi kartid Windows iyo Mac, ma isbarbardhigi kartid Android iyo macruufka, sababtoo ah gabi ahaanba way ka duwan yihiin, waana jeclahay taas tani way jirtaa .. Noocyada kala duwan ee adiga aan ahayn? Shakhsiyan, waxaan dooran lahaa Samsung ama Sony ama Xiaomi, waxaa jira waxyaabo badan oo aan kala doorto, laakiin waligood ma noqonin IPhone, runtiina runtii waan ku faraxsanahay Mr. Jobs, ha ku nasto xasilooni, waxaan jeclahay aaladaha casriga ah ee ku shaqeeya Android Waxaan u bartay interface-kaas, runti dan kama lihi haddii ay fiicantahay, ama dhakhso ayaan kuu xaqiijin karaa marka aad u isticmaasho maalintiina labada xaaladoodba, iPhone 6 - Samsung Galaxy s6 ma tirin doono inta milliseconds waxay qaadataa in la furo arjiga si looga jawaabo fariin. Salaan: 3
Jawaab ku sii Yoseph Franco
Ku habboonaanta aragtidaada gudaheeda, waxaa lagu qiimeeyaa in ugu yaraan aad aqbasho in qofku doorto qalabka uu u doorto raaxada ama si fudud raaxeysi Sida aad ugu dhegan tahay kuwa aad sheegtay. Waxaan la joogaa iphone maxaa yeelay si fudud ayey muddo dheer ugu daaweynayeen si isku mid ah. Hadda bilaw inaad isbarbar dhig ku sameyso arrimaha aanan garaneynin haddii aan ogaan doonno isticmaalka maalinlaha ah, sidoo kale aniga ilama ahan caqli gal. Ama yaa sameeyay waxa, qofkee, sidee iyo goortee iyo hadduu si fiican u qabtay ama si xun u sameeyay ... Waxay kaloo iila muuqataa inaysan ahayn waxa qofku ka filayo isbarbar dhigga ... koox kuwan oo kale ah ayaa si toos ah isu-dheellitiran inta aan awoodi doono inaan isticmaalo qalabka.